Qubanaha » Galmudug,,, waxaa faragalin nagu wada Madaxweynaha iyo Ra”iisulwasaraha +War_Saxafaded.
Galmudug,,, waxaa faragalin nagu wada Madaxweynaha iyo Ra”iisulwasaraha +War_Saxafaded.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa manta dib ugu soo laabtay Cadaado- Caasimadda ku meel-gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Galmudug, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen Wasiiro, Xildhibaano, Saraakiil iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan, oisaga oo sheegay in safarkiisii guul ku soo dhamaaday.
Madaxweynaha oo la hadlayay masuuliyiinti iyo dadweynihii soo dhaweeyay waxuu yiri:
1-“Waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta iyo sida wayn ee aad u muujiseen tageeradiina. Waxaan kaloo ku faraxsanahay sida aad diyaar ugu tihiin in aad Galmudug u difaacataan. Waa arrin I dhiira gelinaysa. Waxaan ugu baaqayaa dadwaynaha reer Galmudug in aysan dheg jalaq u siinin kuwa ka shaqeynaaya tafaraaruqa iyo kala qaybsanaaanta.
2- ma jirto cid aan uga haybaysanayno danta iyo maslaxada Galmudug. Waxaan Golayaasha hogaanka Maamulka Galmudug ugu baaqayaa in ay maqlaan codka Shacabka iyo dadwaynaha waxna ku qaataan sida ay dadku diyaar ugu yihiin uguna go’ntahay in ay midnimada iyo Wadajir ka Galmudug u ilaashadaan”.
Mar uu ka hadlayay Madaxweynuhu Habdhaqanka Dowladda Federaalka Soomaaliya kula dhaqmayso Dowlad Goboleedka Galmudug Wuxuu yiri:
3- “Waxaa wax aad looga xumaado ah in Hogaanka Dawalda Federaalka, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha ay faragelin qaawan ku sameynayaan Galmudug, iyagoo adeegsanaya xasaasiyad iyo caadhifad qabiil si loogu dhaawaco midnimada iyo Wadajirka Galmudug. Waxay isku deyayaan iney carqaladeeyaan wadahadalka Galmudug iyo walaaleheen Ahlu Sunna Waljameeca. Waa wax lala yaabo sida hogaanka dalka loogu aaminayo rag kala qaybin qabiil Galmudug ka dhex wada.
4- Waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada Galmudug ku metala labada gole in ay ka soo dhalaalaan kaalinta uga aadan Galmudug. Waxaan xusuusinayaa in taariikhdu qori, dadwaynaha reer Galmudugna kala garan doonaan cidii wanaag ku metashay Galmudug iyo cidii in ay gumayso go’aansatay”.
Sidoo kale Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug isagoo ka hadlaya qaabka wada shaqayneed ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah wuxuu yiri:
5-“ Halkii ay dawlad Goboleedyada xubnaha ka ah dawaldda Federaalka ka sugayeen wadashaqayn iyo iskaashi ayey dawalda Federaalka xasarad abuur iyo colaad ku bedeshay. Waxay baabi’iyeen Madashii qaran, haatana waxay doonayaan in maamulada dumiyaan. Hadaba Waxaan ugu baaqayaa in ay meel uga soo wada jeestaan faragelinta qaawan ee ay Dawlada Federaalka ku hayso Dawlad Goboleedyada. Waxaan kaloo soo jeedinayaa in ay shir degdeg ah oo arrinkaas looga arrinsanayo isaga yimaadaan”.
Isagoo la hadlaya beesha caalamka wuxuu yiri Madaxweynuhu:
6-“ Beesha Caalamka way arkaan in Dawlada Federaalka ay ku hawlan tahay duminta iyo kala dirka Dawlad Goboleedka. Waxaan leenahay Dawlada Federaalka way gabtay ilaalinta midnimada iyo wadajirka dalka. Hadaba waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka in ay arrinkan sida ugu dhaqsaha badan ugu soo joogsadaan”.
Ugu dambayntii Wuxuu madaxweynuhu ku soo gaba-gabeeyay hadalkiisii:
7- “Waxaan ka tacsidayeynaa dadkii ku dhintay dagaalkii macna darada ahaa ee ka dhacay gobolka mudug. Waxaana ku baaqayaa in la ilaaliyo nabad ku wada noolaanshada shacabka walaalaha ah, iskana qabtaan kuwa ka shaqeynaya iska hor imaadka.